Omnisend: Ihe di mfe iji Platform maka Ecommerce Email & SMS Ahịa akpaaka | Martech Zone
Otu n'ime ọmarịcha ọganihu na azụmaahịa azụmaahịa nke afọ a, n'uche nke m, bụ ọganiihu nke ezigbo ego iji gbochie ahịa ecommerce gị. A ghaghị ijikọ nyiwe akpaaka azụmaahịa dị iche iche wee mezie mkpọsa ọ bụla gafere oge - mmejuputa ahụ nwere ike were izu ma ọ bụ ọnwa tupu ịmalite ịmalite ịhụ ego.
Ugbu a, nyiwe ọhụrụ ndị a anaghị arụpụta njikọta ọnụ, ha nwere mkpọsa ndị dị njikere ịmalite ozugbo i nyeere ha aka. Omnisend bụ otu n'ime nyiwe ndị a - yana mkpọsa ọtụtụ ọwa na-adị njikere ịga:
Usoro Nnabata - Nabata ndị debanyere aha gị ọhụrụ ma gbanwee ha n'ime ndị na-azụ ahịa site na iji ozi ịntanetị enyi na enyi.
Mwepu Ngwaahịa - Gakwuru ndị na-azụ ahịa ndị lere ngwaahịa ma hapụ ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na-enweghị azụ ahịa.
Mwepu Ugbo ala - Naghachi ụgbọ ala ndị ọzọ gbahapụrụ site na iji usoro ndị eji eme ya na ozi email & ozi akpaaka.
Nkwenye Ọtọ - Zipu nkwenye nkwenye SMS ma ọ bụ ozi email na nnata zụrụ ndị ahịa gị ozugbo ha zụrụ.
Nkwenye Mbupu - Nye ndị ahịa gị ịmụmụ ọnụ ọchị site na ime ka ha mata usoro iwu ha dị.
Repee-Ire - Nyefee ahịa ndị ọzọ site na ịtụ aro ngwaahịa ndị ọzọ akwadoro dabere na iwu ndị ahịa gị gara aga.
Ikpo okwu anaghị akwụsị ebe ahụ, Omnisend gụnyekwara ihe niile ịchọrọ iji jikọta data ndị ọzọ, hazie onwe, nkebi, mkpọsa ule, bulie ahịa gị, ma kọọ maka ọganihu gị:
Ihe nnochi onodu onodu - Tinye ma gosipụta ụfọdụ ọdịnaya ọdịnaya email iji họrọ ngalaba ndị na-ege ntị.
Akpaaka Kewara - Kwadoro onyinye na onyinye gị pụrụ iche maka ọtụtụ ụzọ izi ozi ahaziri iche n’ime otu arụmọrụ.
A / B Kewaa Ule - Nwalee iji chọpụta ọwa, mkpali, ma ọ bụ ahịrị isiokwu na-eme ka ị gbanwee ọtụtụ mgbanwe - ma mee mkpebi iji aka gị mee ka data gị ka mma.
Nkebi - Seg ndị ahịa gị dabere na omume ịzụ ahịa ha na ihe ndị ọzọ iji meziwanye mgbanwe na ezubere iche, ozi ịntanetị ahaziri, na ederede.
Ndụmọdụ ngwaahịa - Cross-sell na ike na-atụ aro nke ihe ọ bụla ahịa bụ yikarịrị ka ịzụta.
Ekwentị mkpanaaka SMS - Tinye SMS na ọtụtụ ọwa n'akụkụ n'akụkụ email gị site na iji otu ikpo okwu ma nye otu ahụmịhe ahịa nke ndị ahịa na-agbanwe agbanwe.
iche - Popups, Exit Intent, Landing Pages, Box-sign-up, na Wheel of Fortune ụdị ka ewuchara iji melite nnweta ndị ị debanyere aha.
Gburugburu Gburugburu - Tinye onyonyo nke gị wee malite ịmalite na izipu ndị kọntaktị ozugbo!
Wuru na-Ozi Akụkọ - Sochie ahịa na ntinye aka iji bulie usoro ọrụ gị na-enweghị ahapụ onye ndezi akpaaka.
Akpaaka Akụkọ - Miri miri emi n'ime arụmọrụ arụmọrụ ọ bụla iji tụnyere ọwa dị iche iche ma soro ndị ahịa gbanwere.
Akụkọ di elu - Nyochaa mkpokọta nchịkọta ọrụ nkwụnye ego na ntinye aka wee hụ igwe arụmọrụ gị kachasị arụ ọrụ.
nnabata - Anakọta ozi nkwenye zuru ezu na ụdị TCPA & GDPR.
Omnisend -enyere gị aka mfe leverage gị 3rd ọzọ data mụbaa akuku nke gị ahaziri izi ozi. Nwee ihe okike ma wulite usoro ihe eji eme ihe site na iji ihe omume eme ihe na data sitere na mmemme ikwesị ntụkwasị obi gị na ụgwọ ọrụ gị, nyere tebụl aka, nyochaa mmemme, ọrụ nsuso mbupu, yana ihe niile ka ị na-eji otu Nchịkwa akpaaka.
Na otu-pịa ecommerce n'elu ikpo okwu integrations, pụtara ìhè 24/7 support, na a zuru data mmekọrịta-ị nwere ike ịgbanwee & enweta gị akpaaka akpaaka na-agba ọsọ na naanị nkeji iri atọ. Ecommerce njikọ gụnyere 29 Na-esote, BigCommerce, Magento, Opencart, Prestashop, Shopify & Zụọ ahịa Gụnyere, Volusion, na WooCommerce.
Rịọ ngosi ma ọ bụ bido nnwale efu nke Omnisend
Ngosipụta: M na-eji njikọ njikọ m maka Omnisend na nyiwe ecommerce n'isiokwu a.
Tags: 29 OsoteBigCommerceagbahapụ agbahapụozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụmkpọ gbahapụrụ ederede ederedeụgbọ gbahapụrụ smsecommerceecommerce cross-ere emailecommerce ahịa akpaakaahịa ecommerce mobilesms azụmahịamagentoakụrụngwa ahịaoghereịtụ ozi ịntanetịPrestaShopngwaahịa gbahapụrụ emailozi ịntanetị izipu oziZụọ ahịa & Zụrụ ahịa Plusịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụvollujianabata usoro emailwoocommerce